Russia kwụsịrị njedebe na ụgbọ elu na ọdụ ụgbọ mmiri nke Oké Osimiri Uhie nke Egypt
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Na -agbasa n'Ijipt » Russia kwụsịrị njedebe na ụgbọ elu na ọdụ ụgbọ mmiri Ijipt Oké Osimiri Uhie
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Na -agbasa n'Ijipt • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa Russia • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Russia kwụsịrị njedebe na ụgbọ elu na ọdụ ụgbọ mmiri Ijipt Oké Osimiri Uhie
Akwụsịre njem ụgbọ elu n'etiti Russia na Egypt na Nọvemba 2015 mgbe ụgbọ elu ndị njem Russia dara na Sinai Peninsula wee gbuo mmadụ 224.
Iwu nke machibidoro ụgbọ elu ndị na -ebu ụgbọelu Russia na -aga ebe ntụrụndụ Egypt ka etinyere na 2015.
Na ụdị ọhụụ, iwu nyere ohere ka naanị ụgbọ elu na -aga Cairo na ụgbọ elu gọọmentị na -aga Egypt.
N'April 23 2021, ndị isi ala Russia na Egypt kwetara ịmaliteghachi ụgbọ elu n'etiti obodo Russia na ebe ntụrụndụ Oké Osimiri Uhie nke Egypt.
Onye isi ala Russia Vladimir Putin kagbuola iwu dị afọ 6 nke machibidoro ọrụ ụgbọ elu ndị ụgbọ elu Russia na-aga ebe ndị njem Oké Osimiri Uhie nke Egypt.
Na ụdị ọhụrụ ya, nke Putin kagburu ugbu a, iwu nyere ohere ka ọ bụrụ naanị ụgbọ elu na -aga Cairo na ụgbọ elu gọọmentị na -aga Egypt. O nwekwara ndụmọdụ nye ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya na ndị na -ahụ maka njem ka ha ghara ire ngwaahịa ndị njem na -enye njem ụgbọ elu na Egypt, ewezuga Cairo. Mmachibido ndị a enweghị isi na enweghị isi.
Akwụsịre njem ụgbọ elu n'etiti Russia na Egypt na Nọvemba 2015 mgbe ụgbọ elu ndị njem Russia dara na Sinai Peninsula wee gbuo mmadụ 224. Ndị ọrụ nchekwa Federal Federal Service Service (FSB) mere ka ihe a mere bụrụ ihe iyi ọha egwu.
Na Jenụwarị 2018, Putin bịanyere aka n'akwụkwọ na -enye ohere ịmaliteghachi ụgbọ elu ndị njem echekwara na Cairo, mana a na -amachibido ụgbọ elu ụgbọ elu gaa ebe ntụrụndụ Egypt.
N'April 23 2021, Onye isi ala Russia Vladimir Putin na Onye isi ala Egypt Abdel Fattah el-Sisi nke Egypt kwetara ịmaliteghachi ụgbọ elu n'etiti obodo Russia na ebe ntụrụndụ Oké Osimiri Uhie nke Egypt.